तालिवानको यौ’ न तृ ष्णा मे ‘टाउन घर घर बाट किशोरी तथा महिलाहरु उठाउँदै से’ क्स गु’लाम बनाउँदै – Classic Khabar
September 4, 2021 92
अमेरिका तथा नेटो सैनिक अफगानिस्तान बाट फिर्ता भएसंगै तालिवानले आफ्नो दबदबा बढाएको छ । तालिवानले आफ्नो चलखेल सुरु गरेको छ । तालिवानको बढ्दो प्रभावबाट सबै भन्दा बढी अफगानिस्तानका महिलाहरु प्रताडित बन्न थालेका छन् ।
द सन वेबसाइटको रिर्पाेट अनुसार तालिवानको ब्यक्तिहरुले घर घरमा गएर केटी तथा महिलाहरुलाई खोजी गर्दै उनीहरुलाई से’ क्स गु लाम बनाईरहेको छ । द सनको रिर्पाेट अनुसार तालिवानका नेताहरु अब अफगानिस्तानका युवतीहरुलाई अ’प’ह’रण गर्दै उनीहरुलाई ज’ब’रज’स्ती बिबाह गरेर से’ क्स गु लाम बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
तालिवानको यो हर्कत इराक तथा सीरियामा रहेको इस्लामिक स्टेटको क्रुरता संग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । उनीहरु महिलाहरुलाई से’ क्स गु’ लाम बनाउनका लागि एकदमै कुख्यात रहेका छन् । तालिवानले नियन्त्रणमा लिएको क्षेत्रबाट उनीहरुले १५ बर्ष देखी ४५ बर्ष सम्मका महिलाहरुको लिस्ट तालिवानलाई बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।
जबकी उनीहरु संग आफ्नो केटाहरुको बिबाह होस् भन्ने तालिवानको चाहना थियो । रिर्पाेटका अनुसार अब तालिवानले ज’ब’रज’ स्ती यी उमेर समुहका किशोरी तथा महिलाहरुलाई घर बाटै उठाईरहेको छ । ब्लुमबर्गको रिर्पाेट अनुसार यस प्रकारको हर्कत संगै तालिवानको क ब्जामा रहेको क्षेत्रका महिलाहरुका लागि एकदमै चुनौती बढेर गएको छ ।
Prevएमाले छाडेका वामदेव गौतमको सांसद पद के हुन्छ ?
Nextहिना खान किन डराइन् ? सिद्धार्थको अन्तिम संस्कारमा समेत जान सकिनन्
एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन !